यसकारण नेप्सेमा बुद्धभुमि नेपालको सेयर कारोबार भएन - सिधा मिडिया
३ माघ २०७८, सोमबार १९:३३ मा प्रकाशित
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा आज (माघ ३ गते, साेमबार) बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडकाे सेयर काराेबार हुन सकेन । स्पेशल प्रि ओपन सेसन काराेबारमा म्याच नभएपछि काराेबार हुन नसकेकाे हाे ।
अब आज कम्पनीकाे सेयर काराेबार हुँदैन । स्पेशल प्रि ओपन सेसन काराेबारमा म्याच भएपछि मात्र रेगुलर काराेबार खुल्ने प्रावधान छ । जस अनुसार अब मंगलबार फेरि स्पेशल प्रि ओपन सेसनमा कम्पनीकाे कारोबार खुल्नेछ । साे सेसनमा काराेबार भएमा मात्रै नियमित काराेबार हुनेछ ।
हिजाे (माघ २ गते, आइतबार) कम्पनीकाे ४० लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) नेप्सेमा सूचिकृत भएकाे थियाे। कम्पनीले दाेश्राे बजारमा काराेबारका लागि BNHC सिम्बाेल प्राप्त गरेकाे छ । नेप्सेले कम्पनीकाे पहिलो कारोबारका लागि प्रति सेयर न्युनतम ८४ रूपैयाँ ०५ पैसादेखि अधिकतम २ सय ५२ रुपैयाँ १५ पैसासम्म ओपनिङ रेञ्ज (Open Price Range) निर्धारण गरेकाे छ ।
सिवाईसी नेपालको ओपनिङ्ग रेञ्ज नै यती धेरै ? पहिलो दिनमै प्रति १० कित्ता रु.१०,००० पुग्ने
सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको आईपीओ भाग्यमानी ८ जनाले ११ कित्ता पाउने !
सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको आईपीओकाे बाँडफाँटकाे समय पनि ताेकियाे, ११ कित्ता कतिजनालाई ?